၂၀၁၈ ရဲ့လူသုံးအများဆုံး Xiaomi ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Mi 6X
26 Apr 2018 . 12:54 PM
Xiaomi ကုမ္ပဏီဟာ Mi 6X ကိုမနေ့က (၂၅.၄.၂၀၁၈)မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Design ကတော့ အားလုံးခန့်မှန်းခဲ့သလို Redmi Note5နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ကောင်းသတင်းလို့ပဲပြောရမလား… Mi 6X ကို Mediatek Helio P60 Chipset နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ မှန်ကန်မှုမရှိပဲ Snapdragon 660 Series နဲ့ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က Mi 5X တုန်းကလည်းအတော်ကို အောင်မြင်မှုရခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မော်ဒယ် ဖြစ်တဲ့ Mi 6X ဟာ စမတ်ဖုန်းအသိုင်းအဝိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားမှုအခံရဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Design ပိုင်းမှာတော့ Mi 5x နဲ့ကွာတာဆိုလို့ ဒါင်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ Camera နဲ့ အောက်ဘက်က နားကြပ်ပေါက်နေရာမပါဝင်တော့ပဲ Dual Speaker ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ရှေ့မျက်နှာပြင်ကတော့ 18:9 Ratio ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Notch တော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Body ကတော့ Metal Type ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Display 5.99 လက်မ ရှိပြီး IPS LCD အမျိုးအစားကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ Resolution ကတော့ Full HD+ (2160 x 1080 Pixels) ဖြစ်သွားတာကြောင့် Mi 5x ထက် အနည်းငယ်ပိုကြည့်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
Mi 6X ရဲ့ အဓိက Key Feature ပါပဲ။
အနောက်ဘက်က Dual Camera မှာ 20 Megapixels နဲ့ 12 Megapixels ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုထားတဲ့ Sensors တွေကတော့ Sony IMX486 နဲ့ Sony IMX376 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Aperture က နှစ်ခုလုံး f/1.75 ရှိပါတယ်။ Secondary Lens က Telephoto ဖြစ်ပြီး 2x Loseless Zoom နဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်သလို အရှေ့ဘက် Selfie Camera ကတော့ 20 Megapixels ရှိပြီး Sony IMX376 Sensor နဲ့ Aperture အနေနဲ့ f1.8 ရှိပါတယ်။ Selfie Camera ကို Megapixels မြင့်မြင့် သုံးထားပေမယ့် Selfie Light တော့ ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းမရှိပါဘူး။။ ဒါပေမယ့် AI နည်းပညာထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Dual Camera နဲ့ရိုက်သလိုမျိုး Portrait Selfie ပုံတွေကို ဖန်တီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။။ ပြီးတော့ Face Unlock စနစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်(ဒါကတော့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး)
Battery ကတော့ 3010 mAh ပဲပါဝင်ပြီး Quick Charge 3.0 ကို Support လုပ်တာကြောင့် မိနစ် 30 (နာရီဝက်) အတွင်း 50% ထိ အားသွင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Quick Charge Charger ကိုတော့ သီးသန့်ဝယ်ဖို့လိုမယ့်ပုံပါပဲ။
Performance ပိုင်းမှာတော့ Mi Note3နဲ့အတူတူလောက်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။။ Mi 6X ဟာ Internet သုံး၊ ဂိမ်းဆော့ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့လောက်အတွက်ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက Feature ကတော့ Camera ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့် Selfier တွေရော Photograp့er တွေအတွက်ပါ မျက်စိကျစရာပါ။ Performance ပိုင်းအရ Mi 5X သုံးဖူးတဲ့သူဆိုရင် Mi 6X က ၂ဆနီးပါးပိုကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ Mi 6X သာ မြန်မာပြည်ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ Myanmar Mi Fans တွေရဲ့ အသည်းစွဲစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Mi 6X ဟာ Global Version အဖြစ် Mi A2 အမည်နဲ့ထွက်လာမှာပါ။ Mi A1 နဲ့ Mi 5X လေးအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ ….
Xiaomi က ကြေငြာခဲ့တဲ့ Mi 6x ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့
– RAM4GB နဲ့ Internal Memory 64 GB ကို
တရုတ်ငွေ 1599 ယွမ် (မြန်မာငွေ3သိန်း4သောင်း ဝန်းကျင်)
– RAM6GB နဲ့ Internal Memory 64 GB ကို
တရုတ်ငွေ 1799 ယွမ် (မြန်မာငွေ3သိန်း 8 သောင်း ဝန်းကျင်) နဲ့
-RAM6GB နဲ့ Internal Memory 128 GB ကို
တရုတ်ငွေ 1999 ယွမ် (မြန်မာငွေ4သိန်3းသောင်း ဝန်းကျင်) အသီးသီးကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းစေျးကွက်မှာတော့ ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကွာဟနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ဝယ်ပေးဖို့စိတ်ကူးနေပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ဝယ်ပေးခိုင်းဖို့စဉ်းစားနေပြီလား…. သူငယ်ချင်းတွေသိအောင် ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ရဲ့လူသုံးအမြားဆုံး Xiaomi ဖုနျးဖွဈလာနိုငျတဲ့ Mi 6X
Xiaomi ကုမ်ပဏီဟာ Mi 6X ကိုမနကေ့ (၂၅.၄.၂၀၁၈)မှာမိတျဆကျပေးခဲ့ပါတယျ။ Design ကတော့ အားလုံးခနျ့မှနျးခဲ့သလို Redmi Note5နဲ့ဆငျတူပါတယျ။ ကောငျးသတငျးလို့ပဲပွောရမလား… Mi 6X ကို Mediatek Helio P60 Chipset နဲ့ထုတျမယျဆိုတဲ့သတငျးဟာ မှနျကနျမှုမရှိပဲ Snapdragon 660 Series နဲ့ထုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ မနှဈက Mi 5X တုနျးကလညျးအတျောကို အောငျမွငျမှုရခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆကျတှဲ မျောဒယျ ဖွဈတဲ့ Mi 6X ဟာ စမတျဖုနျးအသိုငျးအဝိုငျးမှာ စိတျဝငျစားမှုအခံရဆုံးစမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Design ပိုငျးမှာတော့ Mi 5x နဲ့ကှာတာဆိုလို့ ဒါငျလိုကျဖွဈသှားတဲ့ Camera နဲ့ အောကျဘကျက နားကွပျပေါကျနရောမပါဝငျတော့ပဲ Dual Speaker ပုံစံလေးဖွဈသှားပါတယျ။ ရှမေ့ကျြနှာပွငျကတော့ 18:9 Ratio ဖွဈသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Notch တော့ပါဝငျလာခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ Body ကတော့ Metal Type ပဲဖွဈပါတယျ။
Display 5.99 လကျမ ရှိပွီး IPS LCD အမြိုးအစားကိုပဲအသုံးပွုထားပါတယျ။ Resolution ကတော့ Full HD+ (2160 x 1080 Pixels) ဖွဈသှားတာကွောငျ့ Mi 5x ထကျ အနညျးငယျပိုကွညျ့ကောငျးနိုငျပါတယျ။
Mi 6X ရဲ့ အဓိက Key Feature ပါပဲ။
အနောကျဘကျက Dual Camera မှာ 20 Megapixels နဲ့ 12 Megapixels ပါဝငျပွီး အသုံးပွုထားတဲ့ Sensors တှကေတော့ Sony IMX486 နဲ့ Sony IMX376 တို့ ဖွဈပါတယျ။ Aperture က နှဈခုလုံး f/1.75 ရှိပါတယျ။ Secondary Lens က Telephoto ဖွဈပွီး 2x Loseless Zoom နဲ့ ပုံရိပျတှကေို ရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈသလို အရှဘေ့ကျ Selfie Camera ကတော့ 20 Megapixels ရှိပွီး Sony IMX376 Sensor နဲ့ Aperture အနနေဲ့ f1.8 ရှိပါတယျ။ Selfie Camera ကို Megapixels မွငျ့မွငျ့ သုံးထားပမေယျ့ Selfie Light တော့ ထညျ့သှငျးပေးထားခွငျးမရှိပါဘူး။။ ဒါပမေယျ့ AI နညျးပညာထညျ့သှငျးပေးထားတာကွောငျ့ Dual Camera နဲ့ရိုကျသလိုမြိုး Portrait Selfie ပုံတှကေို ဖနျတီးပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။။ ပွီးတော့ Face Unlock စနဈလညျးပါဝငျပါတယျ(ဒါကတော့ သိပျမထူးဆနျးပါဘူး)
Battery ကတော့ 3010 mAh ပဲပါဝငျပွီး Quick Charge 3.0 ကို Support လုပျတာကွောငျ့ မိနဈ 30 (နာရီဝကျ) အတှငျး 50% ထိ အားသှငျးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Quick Charge Charger ကိုတော့ သီးသနျ့ဝယျဖို့လိုမယျ့ပုံပါပဲ။
Performance ပိုငျးမှာတော့ Mi Note3နဲ့အတူတူလောကျရှိမယျလို့မြှျောလငျ့မိပါတယျ။။ Mi 6X ဟာ Internet သုံး၊ ဂိမျးဆော့ နဲ့ ဓါတျပုံရိုကျဖို့လောကျအတှကျဆိုရငျတော့ ကောငျးကောငျးကွီးအဆငျပွပေါတယျ။ သူ့ရဲ့ အဓိက Feature ကတော့ Camera ပိုငျးဖွဈတာကွောငျ့ Selfier တှရေော Photograp့er တှအေတှကျပါ မကျြစိကစြရာပါ။ Performance ပိုငျးအရ Mi 5X သုံးဖူးတဲ့သူဆိုရငျ Mi 6X က ၂ဆနီးပါးပိုကောငျးတဲ့ အတှအေ့ကွုံကိုပေးစှမျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ အကယျ၍ Mi 6X သာ မွနျမာပွညျကိုဝငျလာပွီဆိုရငျတော့ Myanmar Mi Fans တှရေဲ့ အသညျးစှဲစမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက Mi 6X ဟာ Global Version အဖွဈ Mi A2 အမညျနဲ့ထှကျလာမှာပါ။ Mi A1 နဲ့ Mi 5X လေးအတှကျတော့ စိတျမကောငျးစရာပေါ့ ….
Xiaomi က ကွငွောခဲ့တဲ့ Mi 6x ရဲ့ ဈေးနှုနျးကတော့
– RAM4GB နဲ့ Internal Memory 64 GB ကို
တရုတျငှေ 1599 ယှမျ (မွနျမာငှေ3သိနျး4သောငျး ဝနျးကငျြ)
– RAM6GB နဲ့ Internal Memory 64 GB ကို
တရုတျငှေ 1799 ယှမျ (မွနျမာငှေ3သိနျး 8 သောငျး ဝနျးကငျြ) နဲ့
-RAM6GB နဲ့ Internal Memory 128 GB ကို
တရုတျငှေ 1999 ယှမျ (မွနျမာငှေ4သိနျ3းသောငျး ဝနျးကငျြ) အသီးသီးကသြငျ့မှာဖွဈပွီး မွနျမာပွညျတှငျးစေးကြှကျမှာတော့ ဈေးနှုနျးအနညျးငယျကှာဟနိုငျပါတယျ။
ကဲ ကိုယျ့ခဈြရတဲ့သူတှကေို ဝယျပေးဖို့စိတျကူးနပွေီလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူတို့ကို ဝယျပေးခိုငျးဖို့စဉျးစားနပွေီလား…. သူငယျခငျြးတှသေိအောငျ ဝမြှေပေးနိုငျပါတယျ။